Edere site Tranquillus | Feb 14, 2019 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Ọ bụrụ n ’ugbu a na-eche, kedụ ihe bụ igbochi ụtụ isi? Ọfọn, ọ bụ ọrụ nke gụnyere iwepu ego site na ụgwọ dị ukwuu nke onye na-atụ ụtụ ego ole ụtụ isi ya ma ọ bụ nke mwepu ọ manyere ya, dị ka onyinye mmekọrịta mmadụ na Generalized Social Contribution ma ọ bụ CSG.
Ụkpụrụ nke usoro a nke mgbake ụtụ
Ihe nchegbu na-egbochi ụtụ, karịsịa, ego a na-akwụ ụgwọ, ụgwọ ezumike nká na ụgwọ ezumike nká. A na-eme ka ọrụ ahụ dị ọhụrụ ma na-akwụ ụgwọ ya dịka ụgwọ a kwupụtara n'afọ gara aga ma ọ bụ afọ N-1.
N'ozuzu, ọ bụ ndị na-akwụ ụgwọ ndị ọzọ, yabụ onye ọrụ ma ọ bụ ego ezumike nká, ndị na-efunahụ ụtụ isi ụtụ isi n'aka ndị ọrụ ha mgbe ha na-akwanyere usoro nhazi ọnụahịa dị na ya. nke iwu French kwadoro.
Uru nke ịkwụsị ụtụ maka ndị na-akwụ ụtụ isi na ụtụ isi
Ịtụ ụtụ isi na-aba uru nye ma ndị ụtụ isi ma ndị isi ụtụ isi. N'ezie, mmejuputa ya dị nnọọ mfe na enweghị ihe mgbu n'ihi na ọ bụ naanị ime nhazi arụmọrụ nke ga-ebelata obere ego nke ụgwọ ụtụ nke onye na-atụ ụtụ isi.
N'ihi ya, ndị nke ikpeazụ agaghị agụta ọdịiche dị n'etiti ụgwọ ọrụ ya na ụgbụ ya ghọta onye ọ na-akwụ ụgwọn'ihi na mgbanwe ndị ọ na-akwụ na-emetụta ndị ụtụ isi. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, echiche nke igbu oge ịkwụ ụtụ isi agaghị emetụ ya n'uche. Site na ebe a na-ekwukarị na ụtụ ịkwụsị na-akwalite ụtụ isi a nabatara.
N'ikpeazụ, ndị na-akwụ ụtụ isi ga-anọgide na-erite uru site na ụtụ isi na ụtụ isi ego, ma ndị a ga-abụ isiokwu gbasara iwu ụfọdụ.
Nsogbu ndị metụtara njikọ ahụ
Ọ bụrụ na ndị a bụ ụkpụrụ na uru nke ụlọnga na-egbochi ya, ọ ga-ahụrịrị na enwere ụfọdụ nrụgide na ya. N'ezie, ndị na-akwụ ụgwọ ndị ọzọ nwere ike ịchọrọ ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọzọ tupu ha enwee ike itinye usoro nchịkọta ego a. Nke a ga - abụ ihe na - adịghị mma maka ụlọ ọrụ na ajụjụ yana maka uru ọ bara.
Ma ọ bụghị ya, ndị ụtụ isi nwere ike ịnwe nsogbu nzuzo na ozi gbasara ọnọdụ akụ na ụba ha na ezinụlọ, dịka ijigide na-achọkarị ikpughe ozi ụfọdụ.
Ihe ị chọrọ ịma banyere ịghara Mee 13th, 2020Tranquillus
gara agaJiri email ụlọ ọrụ
-esonụAlphorm, IT ọzụzụ ugbu a dị n'ịntanetị